Afhayeenka baarlamaanka Puntland iyo wafti uu hogaaminayo oo ku sugan Gaalkacyo, kulamana la yeeshay madaxda gobolka. [Akhris …] – Radio Daljir
Luulyo 7, 2009 12:00 b 0
Galkacyo, July 07 – Guddoomiyaha Baarlamaanka Puntland Cabdirashiid Maxamed Xirsi oo ku sugan magaalada Galkacyo ayaa waxaa ay booqasho ay ku tageen goobo muhiim ah oo ku yaalla magaalada Gaalkacyo halkaas oo ay kulammo kula qaateen Mas?uuliyiinta gobolka iyo kan degmada.
Guddoomiyaha iyo Wafdiga uu hoggaaminayo ayaa waxaa booqashadooda ku sheegeen in ay tahay mid ay ugu kuur galayaan xaaladaha amni ee gobolka gaar ahaanna magaalada Gaalkacyo iyada ay u socdaan hawlaha maamulka gobolka iyo kan magaalada oo beryihii ugu danbeeyey ay isa soo taratayeen amni xumo laga dareemayo xilliyada habeenkii oo qeybo ka mid ah magaalada ay kooxo ku baartaan dadka rayadka ee deegaanka ku dhaqan.
Wafdiga Guddoomiyaha oo isugu jiro Wasiirro iyo Wasiirro ku xigeenno ku waas oo asal ahaan ka soo jeeda gobolkan ayaa waxaa ay warbixinno kaga dhageysteen maamulka gobolka, Taliyayaasha ciidamada iyo mas?uuliyiinta degmada Gaalkacyo sida ay u socdaan hawlaha gobolka ee amniga iyo maamulka.
Ciidammada ammaanka ayaa waxaa dhawrkii beri ee ugu danbeeyey lagu arki karayey waddooyinka magaalada Gaalkacyo iyaga oo baaritaanno xilliyada habeenkii ah ku sammeynaya gawaariada isaga dhex gooshta magaalada iyaga oo sidoo kalena ka fiiqayey Bacaha Beersoolka gawaariada ay ku qafilanyihiin.
Sidoo kale ciidamada ayaa lagu arki karayey iyaga oo ku guda jira hawl gallo inkasta oo aysan ahayn hawl galladooda mid ay magaalada oo dhan ay ka sammeynayeen ayaa waxaa ay ku koobnaayeen waddada dheer ee Laammiga.
Dhinaca kalena dawladda Hoose ee magaalada Gaalkacyo ayaa waxaa ay waddey abaabylka ku aaddan hawl gallada looga fiiqayey Gawaarida Beersoolka, waxaana dhaq dhaqaaqaan si weyn looga dareemayaa agagaarka Saldhigga Bartamaha ee magaalada Gaalkacyo.
QM oo sheegtey in Muqdisho ay ka barakaceen in ka badan 200,000 oo rayad ah. [Akhris …]